GIMP dia mamoaka kinova vaovao miaraka amin'ny fanovana vaovao amin'ny endriny | Famoronana an-tserasera
GIMP dia mamoaka kinova vaovao miaraka amin'ny fanovana vaovao amin'ny endriny
Jorge Neira | | Gimp, Fitaovana famolavolana
Androany dia misy infinities ny fampiharana na programa tena ilaina Raha resaka fanontana nomerika dia lasa fomba fiaina mahasoa tokoa ny doka ary noho io antony io dia mifaninana hatrany ny orinasa mamorona fitaovana ilaina hitondrana ny anarany ambony, ny sary foana no ho marika fampisehoana rehefa isika mila mampahafantatra ny orinasanay.
Rehefa mampiasa Internet isika, dia afaka mahita infinities of tena ilaina fampiharana ho an'ny elaboration ny sasany fanitsiana sary na asa famoronana sary. Betsaka ny programa azontsika ampiasaina amin'ny informatika, fa vitsy ny manolotra antsika a interface tsara fa tena matanjaka tokoa raha ny amin'ny fanaovana asa tsara, amin'ity indray mitoraka ity dia tsy azontsika atao ny tsy hiteny an'ity programa mahafinaritra ity: GIMP.
GIMP dia mamoaka kinova vaovao miaraka amin'ny fanovana vaovao amin'ny endriny, fitaovana fanaovana sary ary ny fitantanana ny loko
Fitaovana tena mora ampiasaina izy io, manana izay rehetra ilaintsika izy ary azo lazaina fa mihoatra izany.
Tena tsara izany rehefa tsy maintsy mamorona logo ho an'ny orinasa na orinasa ara-barotra, marika vokatra amidy, ankoatry ny zavatra maro hafa isika. Ho fanampin'izany, ny mazàna misarika ny saina dia izany Ity dia programa maimaim-poana tanteraka izany dia mety ho eo amin'ny haavon'ny Photoshop malaza eran-tany.
GIMP dia rindranasa rindrambaiko maimaimpoana ary novolavolaina mba hampiasaina amin'ny Linux. Noho ny fangatahana vokariny androany dia afaka mankafy an'io fitaovana io koa isika amin'ny alàlan'ny rafitra fiasa Windows.
Hatramin'ny namoronana azy dia misy kinova maro izay nohatsaraina rehefa mandeha ny fotoana. Raha ny marina, GIMP dia mamoaka kinova vaovao miaraka amin'ny fanovana vaovao amin'ny endriny, fitaovana fanaovana sary sy fitantanana loko, miresaka 2.9.4 izahay, saingy mampalahelo anay kely ihany anefa ny mahita fa tsy kinova Ofisialy io, na dia tsy ny zava-drehetra mifandraika amin'ity vaovao ity aza dia ratsy tanteraka, satria amin'ity kinova beta vaovao ity dia afaka mahalala izay miandry antsika atsy ho atsy ho an'ity fitaovana famolavolana sary lehibe ity.
Ny Version 2.9.4 dia misy fanatsarana tena lehibe ary iray amin'ireo manaitra indrindra ny fampifandraisany, zava-baovao tanteraka, ankoatry ny fanasongadinana ny fandrosoany momba ny fitaovana fanaovana sary.
Mandritra izany fotoana izany dia zava-dehibe ny manamarika fa izany rehetra izany dia nitranga tao anatin'ny 1 taona latsaka, izay nanambarana ireo fanatsarana lehibe rehetra ireo na dia zara raha tao amin'ny kinova beta aza izy rehetra, mba hahafahan'ny mpampiasa miasa fotsiny ny volavolain'izy ireo amin'ny aina tsara kokoa, nefa koa araka ny itiavanao azy rehefa mampiasa fitaovana.
GIMP tsy programa tsotra fotsiny ny manitsy sary na sary, Izy io koa dia afaka manome antsika fotoana hisarihana sary sy hamoronana endrika am-boalohany tanteraka hatrany am-boalohany. Noho izany dia manana ny vaovao izy Fitaovana MyPaint, izay manana fiasa mihatsara ary mamela antsika hanana topi-maso ny valiny izay misy karazana borosy.
Etsy ankilany, manana ao anatin'ireo fitaovana vaovao ireo ny mampiavaka ny fomba fanaovana sary simetika. Amin'ity maodely mahafinaritra ity dia azontsika atao ny mampiasa ny tombony rehetra omen'ny GIMP antsika amin'ny sary miaraka amina karazana symmetry, toy ny fitaratra na ny mozika.
Ao amin'ity kinova GIMP vaovao ity misy fanovana vaovao amin'ny endriny, fitaovana fanaovana sary sy fitantanana loko (2.9.4)Ity programa ity dia misy koa fanatsarana hafa toy ny fitaovam-pifidianana. Ohatra, azontsika atao ny mandray ireo tranga izay misy fizarana iray voafidy dia ahitana faritra kely maro hafa izay tsy voafantina, izay azo esorina amin'ny tsindry tokana.
Toy izany koa, safidy hafa dia nampidirina tao amin'ny sisin'ny fisafidianana, ankoatry ny tombontsoa vaovao hafa izay mamela ny manampy pixel manakaiky ny fizarana vita.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » GIMP dia mamoaka kinova vaovao miaraka amin'ny fanovana vaovao amin'ny endriny
Milton Glaser ilay mpamorona ao ambadiky ny tiako New York
30 taona ny GIF voalohany, iza no nieritreritra